Sun conjunct သားစဉ်မြေးဆက်ဘာကိုဆိုလိုသလဲ - ကွဲပြားခြားနားသောမေးခွန်းများ
Sun conjunct သားစဉ်မြေးဆက်ဘာကိုဆိုလိုသလဲ
မေးခွန်းများနှင့်အကောင်းဆုံးအဖြေများ - Synastry: Sun ကတွဲဖက်ဆင်းသက်လာ
တက်ကြွဆန့်ကျင်ဘက်နေရောင်Natal ကိုလည်းခေါ်သည်Sun ကတွဲဖက်။ ဆင်းသက်လာနှင့်နေဆက်တင် ဤရှုထောင့်သည်အခြားမည်သည့်အရာထက်မဆိုပိုမိုနီးကပ်သောတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဆက်ဆံရေးကိုဆိုလိုသည်။ သငျသညျပြည့်စုံခံစားရစေရန်သင်အမှန်တကယ်အဖော်လိုအပ်ပါတယ်။၉ ။ 2018 ။
ဟေး mystic ကျွန်ုပ်၏လိုင်းကိုကြိုဆိုပါ။ သို့မဟုတ်ယနေ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါ။ ကျွန်ုပ်သည်တက်နေသောဆင်းသက်လာ ၀ င်ရိုးအကြောင်းကိုပြောပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ ၀ င်ရိုး၌ ၀ င်ရိုးရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဝင်ရိုးစွန်းတွင်ကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည်မှာပထမအချက်မှာဤစီးရီးသည်ဆိုလိုသည်။ ဒီစီးရီးကိုဝိညာဉ်အိမ်ထောင်ဖက်တွေအတွက် synastric ရှုထောင့်လို့ခေါ်တယ်။ ငါအရမ်းနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအတွက်သင်သုံးတဲ့ဘယ်စကားလုံးကိုမဆိုဆိုလိုတာပါ၊ သူတို့ဟာသိပ်တိုတောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်နိုင်တယ်၊ သူတို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ငါစကားပြောတဲ့ကြာချိန်အကြောင်းတောင်မပြောတတ်ဘူး။ မင်းရဲ့ဘဝကိုတကယ်အကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့ဒီဆက်နွယ်မှုတွေအကြောင်းဒါငါ့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးမသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်ကျွန်ုပ်၏အခြားမသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်သည် synastry ရှုထောင့်တစ်ခုလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ယနေ့ငါထောင့်များသို့မဟုတ်ပုဆိန်များအကြောင်းပြောနေတာဖြစ်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဝင်ရိုးဆက်စပ်မှုတွေမှာ Synastry မှာအလေးချိန်အများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်သူကမင်းရဲ့ synastry တစ်ခုလုံးကိုသင်ကြည့်တဲ့အရာအားလုံးမရှိလို့ပါ။ သူတို့ယူဆောင်လာတဲ့အရာတွေကိုနားလည်တာထက်အခြားကိစ္စတွေမှာသိပ်အာရုံစိုက်စရာမလိုပါဘူး။ စားပွဲပေါ်မှာခင်ဗျားရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာနောက်ကွယ်ကရှုထောင့်တစ်ခုအပေါ်မှာအာရုံစူးစိုက်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုလုံးကိုဖော်ပြဖို့သိပ်မသုံးသင့်တော့ပါဘူး။ အိုကေ၊ ကျယ်ပြန့်တဲ့မှန်ဘီလူးနဲ့အတူအိုကေ၊ ငါတုန်ခါနေတဲ့ကုလားထိုင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။ ကျောက်တုံးကိုမမောင်းဖို့ကြိုးစားတော့မယ်။ အရမ်းခက်တယ်၊ ဒါကြောင့်တက်နေတဲ့သားစဉ်မြေးဆက်ကိုသံလိုက် ၀ င်ရိုးလို့ခေါ်တယ်။ ဒါကြောင့် Ascendant အကြောင်းပြောကြစို့။ သူက AC ကိုတစ်ခါတစ်ရံအတိုကောက်ခေါ်လေ့ရှိတဲ့ AC ကိုလည်းခေါ်တယ်။ သင်၏ကြားနိူင်သည့်နိမိတ်လက္ခဏာသည်သင်၏ ascendant ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ယခုခေတ်အရှေ့ဘက်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းပေါ်ရှိနိမိတ်နှင့်အတိအကျအတိအကျနှင့်သင်၏မွေးဖွားမှုအနေအထားကြောင့်သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးအိမ်၏အစွန်အဖျားနှင့်များစွာကိုအမှတ်အသားပြုသည်။ တက်ကြွသို့မဟုတ်တက်နေသည့်နိမိတ်သည်အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုလူနည်းနည်းဖြင့်တစ်နည်းနည်းဖြင့်အတိုကောက်ရေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ လူများကသင့်ကိုဤနည်းဖြင့်တွေ့မြင်သည်သို့မဟုတ်သင်ဝတ်ဆင်သည့်မျက်နှာဖုံးသည်သင်၏တက်ကြွသောဆိုင်းဘုတ်နှင့်သင်၏တက်ကြွမှုနှင့်အတူအနည်းငယ်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသွားစေရန်သင်ကြားဖူးပါသလား။ သင် ၀ တ်ဆင်ထားသောမျက်နှာဖုံးသည်သင်ဘဝနှင့်သက်ဆိုင်ပြီးတုံ့ပြန်သည့်နည်းလမ်းလည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဘဝရှိလူများအပေါ်သင်၏ပထမဆုံးတုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။ သင်ကကမ္ဘာကိုပြရန်သင်တက်သည့်ဝတ်စုံနှင့်တူသည်၊ မကြာခဏ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ထဲ၌မြင်တွေ့ရမည့်အရည်အသွေးများကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအဲဒီအရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာမဆိုလိုပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပြတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။ ပထမဆုံးအိမ်ကနိဂုံးချုပ်အနေနဲ့၊ ငါတို့ရဲ့ပုံပန်းသဏ္andာန်၊ ဘယ်လိုပုံပန်းသဏ္ဌာန်နဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုမြင်တာလဲဆိုတာကိုလည်းကိုယ်စားပြုတယ်။ ဥပမာ၊ ငါ Sagittarius တက်နေသည် ဒါပေမယ့်ငါတကယ်တော့လူကန်လန်နဲ့ Sagittarius ဟာယေဘုယျအားဖြင့်အလွန်လူပေါင်းသင်းဆက်ဆံတတ်တယ်၊ သင်သိတယ်၊ အလွန်အကောင်းမြင်တတ်ပြီးစွန့်စားခန်းလည်းဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါကဒီအရာတွေပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါကလူကောင်းလူမန်းတစ်ယောက်၊ ငါလူရွှင်တော်ဖြစ်ခဲ့ရင်သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုလှောင်ပြောင်ကြလိမ့်မယ်။ မင်းကလူကန်သွင်းခြင်းမခံရဘူးလို့ငါပြောတဲ့အချိန်မှာမင်းဟာငါတွေ့ဖူးသမျှထဲမှာလူပေါင်းအများဆုံးပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းခံရသူပါ။ ဒါကငါဘဝနဲ့အပြန်အလှန်အကျိုးပြုတယ်၊ ငါ ၀ တ်ထားသောဤမျက်နှာဖုံးကိုမြင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်သည်လုံးဝမှေးမှိန်သွားပြီဟုယုံကြည်စေသည်။ သားစဉ်မြေးဆက်ထဲသို့နည်းနည်းဝင်ခွင့်ပြုပါစေ၊ တခါတရံတွင် DC ver မှဆင်းသက်လာသည်မျိုးဆက်သည်စတုတ္ထအိမ်နှင့်စတုတ္ထအိမ်၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသည်။ လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏အိမ်သူအိမ်သားတ ဦး တည်း -on-one ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောပွင့်လင်းသောရန်သူများကဲ့သို့သောအရာများနှင့် Venus မှထိန်းချုပ်ထားသောအရာများကဲ့သို့သောဆက်နွယ်မှုများ၊ ထို့ကြောင့်သားစဉ်မြေးဆက်သို့မဟုတ်ဒီစီကဘာကိုကိုယ်စားပြုသည်ကိုသင်ကြားခဲ့ရသောရိုးရှင်းသောရှင်းပြချက်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ပြီးသင်၌တစ်ခုခုရှိကြောင်းသင်သိသော်လည်းကျွန်ုပ်သွားလိုသည် လူငယ်နှင့်အနည်းငယ်ပိုမိုလေးနက်သည်၊ ကလေးများကိုသင်၏အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်ရှုမြင်ပါ၊ သင်ကမ္ဘာအားမမြင်စေချင်၊ သို့မဟုတ်သင်မဝတ်လိုသည့်မျက်နှာဖုံးများဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုလက်ခံရန်နှင့်ချစ်ရန်ရုန်းကန်နေရသည့်မိမိတို့၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည် ဆက်နွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်သိပ်ပြီးမစုံလင်လျှင်၎င်းသည်ဆက်ဆံရေးကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်ဝိညာဉ်ရေးရာလမ်းကြောင်းမည်သို့ရှိနိုင်ကြောင်းသင်ကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်စေသည်၊ အကြောင်းမှာထိုအရည်အသွေးများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုမြင်သောအခါချစ်မြတ်နိုးခြင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုတွေ့မြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်ဆက်သွယ်ခြင်းအရည်အသွေးများအမှတ်တမဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လက်ခံရန်သင်ယူခြင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဤဆက်သွယ်မှုသည်သံလိုက်ဆန့်ကျင်မှုများသည်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး အပြည့်အဝဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်တူသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ဇယားတစ်ခုနှင့် asynastry ဇယားတွင်ကြည့်သည်ကိုကြည့်ကြပါစို့။
မင်းရဲ့ synastry ဇယားမရှိဘူးဆိုရင်ငါဒီကဒ်ကိုငါ့သင်ခန်းစာမှာချိတ်လိုက်မယ်၊ မင်းရဲ့ပုံကငါနဲ့ငါလုပ်နေတဲ့ပုံလိုမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်၊ တခါတလေဒီဟာအရမ်းအထောက်အကူရတယ်၊ ငါနက္ခတ်ဗေဒင်လေ့လာတုန်းကဒီဟာကအရမ်းအထောက်အကူဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီဇယားမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတာကြည့်ကြရအောင်။ ငါသင်ခန်းစာထဲမှာမင်းရဲ့ synastry ဇယားကိုဘယ်လိုအခမဲ့ရနိုင်မလဲဆိုတာကိုပြလိုက်တာနဲ့ဒီဇယားကိုငါလုပ်ခဲ့တာလား၊ အရင်ကငါလုပ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်ကြည့်ရအောင်။ ဒါကြောင့်အစောပိုင်းမှာကဒ်ပြားထည့်လိုက်တာလား၊ ယခု link သည်ဖော်ပြချက်နယ်ပယ်တွင်အဆင်ပြေပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပုံကိုအဆင်ပြေအောင်ထားပါ။ ဤဥပမာတွင်မိန်းမသည်အပြာရောင်တွင်ရှိပြီးခင်ပွန်းသည်အနီရောင်၌ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုရေးသားသည်။ ကျား၊ မမရွေး ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်ငါအာရုံစူးစိုက်သောအရာဖြစ်သည်၊ ငါအာရုံစူးစိုက်လေ့ရှိသည်၊ ၎င်းသည်အလယ်၌မည်သူနှင့်မည်သူသည်အပြာရောင်အမျိုးသမီးဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကိုမည်သို့ခြေရာခံနိုင်ကြောင်းမှတ်ချက်လေးတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ဒီဥပမာကို? အနီရောင်သည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုခဏထိန်းသိမ်းထားနိုင်သောခွေးတစ်ကောင်လိုချင်သည်။ ငါပြန်လာမည်၊ ပြန်လာမည်။ ခွေးလေးကောင်နှင့်မှတ်တမ်းတင်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်တစ်ခါတစ်ရံစိန်ခေါ်မှုအနည်းငယ်သာဖြစ်သည် ဒီနေရာမှာဒီတစ်ခုမှာ Ascendant-Descendant-Axis-Conjunction ရှိတယ်။ အထူးသဖြင့်မိတ်ဖက်တစ်ခုချင်းစီ Ascendant သည်အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏သားစဉ်မြေးဆက်များ၏တွဲဖက်မှုဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ဒီပုံမှာဆင်းသက်လာတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကဒီဝင်ရိုးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အချက်ပဲ။ ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အပြာရောင်လူကိုပဲအာရုံစိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ သူတို့ရဲ့ဆင်းသက်လာမှုကဒီမှာပါ။ သူတို့ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်ကဒီမှာပါ။ သူတို့ကို ၂ / ဒီဂရီလီယိုအောက်မှာထားလျှင်ဒီစီဟာသူတို့ရဲ့ DC က ၂၂ ဒီဂရီ Aquarius မှာသူတို့ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်ဖြစ်တယ်၊ ဆန့်ကျင်ဘက်နိမိတ်လက္ခဏာတွင်ပုဆိန်ဖြစ်သောကြောင့်သင်၏တက်နေသောနိမိတ်လက္ခဏာသည်ကင်ဆာတွင်ရှိနေသည်။ သင်၏ပုဂ်္ဂိုလ်တက်သောအခါသို့မဟုတ်သင်၏သားစဉ်မြေးဆက်သည် Virgo ငါဖြစ်လိမ့်မည် Pisces ဖြစ်သည့်အခါ၊ သင်၏ဆွေစဉ်မျိုးဆက် Capricorn တွင်ရှိလိမ့်မည်၊ ကျွန်ုပ် Sagrising၊ ဆင်းသက်လာ Gemini ၌တည်ရှိ၏, ဒါအတူတူပါပဲဒီမှာ Dantis ၏လူ၏တက်ကြွဒီမှာကျနော်တို့ Hisdescendant ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာငါတို့သိကြ၏, ဒါကြောင့် Hisascendant 23 ဒီဂရီ Aquarius ဖြစ်တယ်, ဒါ Hisdescendant 23 ဒီဂရီလီယိုသည်, ဒါကြောင့်ဒီဟာအလွန်နီးကပ်တစ်ခုဆက်စပ်မှုဖြစ်ပါတယ် ဒါကဒီဂရီနှစ်ခုလုံးအတွင်းမှာဒီဂရီတစ်ခုအတွင်းမှာဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့်သင်က ၀ င်ရိုးနဲ့ဆက်စပ်နေသမျှအရာဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့ဆက်စပ်ဖို့တစ်ခုခုခြောက်ခုဒီဂရီအထိသုံးလို့ရတယ်။ ဒီကဝင်ရိုးမှာငါကြိုက်တဲ့ ၀ င်ရိုးနှစ်ခုကနေ ၃ ဒီဂရီအတွင်းမှာငါကြိုက်ပေမဲ့၊ ခြောက်ဒီဂရီ, sometim အထိခံစားခဲ့ရလိမ့်မည် ရှစ်ဒီဂရီအထိရှိသည်။ ၎င်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်ဆွဲလိုသည်ထက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည်။ အခြေအနေအပေါ်မူတည်သည်။ သင်ဒီမှာမြင်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်သာဓကအားဖြင့်အထက်သို့ဆင်းခြင်းနှင့်ဝင်ရိုးအကြောင်းကိုသာပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ခင်ဗျားမှာခင်ပွန်းကသူမှာ Venus နဲ့ Sun ရှိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ Ascend နဲ့အတူသူကဒီအရာတွေအားလုံးဟာသူ့ဇနီးရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်တွေနဲ့ဆက်နွှယ်နေတယ်၊ ​​အဲဒါကဒီအဆက်အပိုတွေအတွက်အဒေါ်တွေယူလာပေးပေမဲ့၊ သငျသညျဒီမှာအိမ်များကိုကြည့်သောအခါနှင့်သင်မဟုတ်သည့်အခါငါစားပွဲပေါ်မှာငါအိမ်သူအိမ်သားပထမ ဦး ဆုံးအိမ်၏ထိပ်သည်နှင့်ဆင်းသက်လာ၏ထိပ်သည်ဆိုပါကဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိလိမ့်မယ်ထင်အိမ်များအကြောင်းကို သင်ဤအမှုကိုပြုသည့်အခါသတ္တမမြောက်အိမ်သည်တွဲဖက်ပြီးတက်ခြင်းနှင့်ဆင်းခြင်းရှိခြင်းသည်ပုံတစ်ခုလုံးအတွက်အိမ်များသည်သူတို့၏ဆန့်ကျင်ဘက်အိမ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုဆိုလိုသည်၊ ၎င်းသည်ဤသံလိုက်အရည်အသွေးကိုဤဆက်သွယ်မှုသို့အမှန်တကယ်အလေးပေးသောကြောင့်ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိခြင်းအခြားမိတ်ဖက်တစ် ဦး ၏အိမ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၌ ၀ ိညာဉ်ရေးရာအိမ်နှင့်ဆက်စပ်သောနေ့စဉ်ဘ ၀ နှင့်နေ့စဉ် ၀ န်ဆောင်မှုများရှိသည်။ Imean သည်အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှု၏အိမ်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ပေးသောချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အိမ်ကိုဆက်သွယ်သည် ငါတို့ရရှိသောချစ်ခြင်းမေတ္တာကျွန်ုပ်သည်ဤလှပသောသဘောသာဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသံလိုက်စွမ်းအင်နှစ်ခုကိုဤလူတို့အားမည်သို့ဆောင်ကြဉ်းပေးပြီး၎င်းတို့ကိုနေရာတွင်ထားရှိခြင်း၎င်းသည်လက်ထပ်ခြင်းနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်လာသောစိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှားရန်အပိုစွမ်းရည်ကိုပေးသည်။ သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်အခြားလူထက်လျော့နည်းဖြစ်ကြသည်။
လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုနှင့်ဆက်နွယ်မှုဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးသည်ခက်ခဲကြောင်းသင်သိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုနှင့်ဆက်ဆံမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့ရသည့်အရာများကိုကျော်လွှားရန်ခဲယဉ်းသော်လည်း၊ ဤတွဲဖက်မှုသည်တက်လာသည့်အဆက်အသွယ်သည်ဤအလွန်ခက်ခဲသောအချိန်များကိုကျော်လွှားရန်အပိုစွမ်းအင်အနည်းငယ်ကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည်။ ဤအချိန်သည်ဤလူများ၌လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်သူတို့လက်ထပ်ပြီးနှစ် ၆၀ အတွင်း ၆ လအတွင်းလက်ထပ်ခဲ့ကြပုံ ၂၃ နှစ်ပြည့်လက်ထပ်ပြီးဖြစ်သောစုံတွဲတစ်တွဲနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြုခဲ့ပြီး၊ သူတို့သည်အတူတူတွဲဖက်မှုရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်၍ ယခုကဲ့သို့လွယ်ကူသောလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုများမပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ဆိုလိုတာကသူတို့လွယ်လွယ်ကူကူပဲသူတို့ဟာသူတို့သံသရာမှာအတူတကွချိတ်ဆက်ထားတာကိုသူတို့ကလိုက်လျောညီထွေလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်တာပါလို့ဆိုလိုတာပါ။ ဒါ့အပြင်သူတို့အတူတကွသော့ခတ်လိုက်တာနဲ့သူတို့သံလိုက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တာဘယ်လောက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်။ သငျသညျဤအကြောင်းကိုမေးခွန်းများသို့မဟုတ်ငါအိမ်များသို့မဟုတ်တစ်ခုခုရှုပ်ထွေးနေတယ်ဆိုရင်ငါတစ်ခုခုကိုဖြေရှင်းရန်လိုအပ်ပါတယ်လျှင်ငါကဖြေရှင်းရန်ငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတစျခုထားခဲ့ပါနှင့်ငါသင်တို့၏မေးခွန်းကိုပြန်ပြောပါနှင့်အမြဲတမ်းအဖြစ်ဒီမှာဖြစ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်လိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဆောင်းပါးကိုနှိပ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင်၏အချိန်နှင့်အတူလုပ်ဆောင်ခြင်းကိုနှစ်သက်သောအခြားအရာများစွာရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Instagram နှင့် Facebook @ galacticmystic တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ယခုကျွန်ုပ်၏ website ကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ငါကဒီမှာကဒ်ထည့်ပေးမယ်။ မင်းငါ့မျက်နှာအုပ်စုလည်းပါမယ်။ galacticmatrix Mystics လို့ခေါ်တဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဖွဲ့ကနက္ခတ်ဗေဒင်အရ artsit အားလုံးရဲ့ Tarot mysticism ဟာအလွန်ရင်းနှီးတဲ့အုပ်စုတစ်စုပါ။ ဒါကြောင့်သင်အမှန်တကယ်သေးငယ်သောအရာတစ်ခုသိရှိလာရင် ပါရမီရှင်နက္ခတ်ဗေဒင်ဆရာများ၊ တာတိုစာဖတ်သူများ၊ နှုတ်ကပါဌ်တော်များဖြစ်ကြပြီးဤလက်ဆောင်များကိုအသုံးပြုခြင်း၏မှော်အတတ်ကိုဝေမျှကြသည်
synastry အတွက်တွဲဖက်။ ကဘာလဲ?
တွဲဖက်(ဂြိုလ်များသည်နိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုတည်းတွင်ရှိသည်။ ) ဤရှုထောင့်သည်ဂြိုဟ်စွမ်းအင်ပုံစံနှစ်ခုနှင့်အတူတကွသက်ရောက်စေသည်။ Theတွဲဖက်အတွက်အင်အားအကောင်းဆုံးရှုထောင့်ဖြစ်ပါတယ်သရက်ပါ ၀ င်သည့်ဂြိုလ်များပေါ် မူတည်၍ သဟဇာတဖြစ်စေ၊၁၇ ။ 2017 ။
မွေးကင်းစဇယားတွင်လူတစ် ဦး ၏အတ္တသည်သူတို့၏စိတ်ခံစားမှုနှင့်လုံးဝမရောထွေးကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမင်းရဲ့ဘဝကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်၊ မင်းပိုတည်ငြိမ်တယ်လို့ခံစားရတယ်
ဘာဖြစ်သလဲအဆိုပါရာသီခွင်ရဲ့ဆင်းသက်လာနိမိတ်လက္ခဏာ? ၎င်းသည် Ascendant နှင့်နီးကပ်စွာချိတ်ဆက်ထားသောအယူအဆဖြစ်သည်လက်မှတ်ထိုး။ သို့သော်လူမှုရေးအရပြောနေသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပင်ကိုစရိုက်ကိုပြောသောတက်စကင်နှင့်မတူသည်မျိုးဆက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ဆက်သွယ်လိုသူများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတွင်ပေါ်လာသောလူများအကြောင်းကိုပြောပြသည်။12 2019 ။
Sun Trine Ascendant ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
Sun Trine တက်ကြွခိုင်မာတဲ့ရှိနေခြင်းနှင့်အတူတစ်စုံတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝကျကျသြဇာသူတစ်စုံတစ် ဦး ။ ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့်နှင့်အနုပညာဆန်ပြီးသူတို့သည်တီထွင်ဖန်တီးမှုပုံစံတွင်ဖော်ပြလိုကြသည်။ ဒါဟာအကြားသဟဇာတရှုထောင့်အောက်မှာမွေးဖွားသူတို့အဘို့လွယ်ကူပြီးသဘာဝပါပဲနေပြီးနောက်တက်သည်အခြားသူများကကောင်းစွာလက်ခံရရှိခံရဖို့။
အကောင်းဆုံးအင်္ဂါဂြိုဟ်နိမိတ်လက္ခဏာကိုလိုက်ဖက်တဲ့သူတို့နှင့်လိင်ဆက်ဆံဖက်အင်္ဂါဂြိုဟ်ဆိုင်းဘုတ်Scorpio, Cancer, Pisces (သို့) Taurus မှာသူတို့ရဲ့အစွမ်းထက်တဲ့လိင်မှုကိစ္စအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။၂ ။ 2018 ။
မွန်း Conjunct ဗီးနပ်စ်အကူးအပြောင်းသည်သင်၏ဘဝကိုငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်သဟဇာတဖြစ်စေသည်။ မင်းအလိုတော်စိတ်ခံစားမှုကိုဂရုစိုက်ပါ။ ဒါဟုတ်တယ်ချစ်ရသူများနှင့်အတူသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူပါတီနှင့်အတူအနားယူရန်အကောင်းဆုံးအချိန်။ မင်းဖြစ်ကြသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာစိတ်နှင့်ပုံမှန်ထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ မင်းဖြစ်ကြသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြုလုပ်ခြင်းကဲ့သို့ကောင်းသောစွမ်းအင်ကိုပိုမိုထိခိုက်လွယ်သည်။၂၉ ။ 2017 ။
အကယ်၍မင်းရဲ့နေနှင့်လထဲမှာထားရှိနေကြသည်တူညီသောနိမိတ်လက္ခဏာ,မင်းရဲ့လိုချင်ချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုစည်းလုံးကြသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်သင်သည်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌သင်ခံနိုင်ရည်နည်းသည်ဟုခံစားရသည်မင်းရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းနှင့်အခြားသူများထက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုမိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလေ့ရှိပါတယ်။၁၈ ။ 2020 ။
အထူးသဖြင့် Malefic Planetsအင်္ဂါဂြိုဟ်, Saturn, Rahu နှင့် Sun က, ပြိုကွဲသို့မဟုတ်ကွာရှင်းဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ malefic ဂြိုလ်များ၏ဆိုးကျိုးများသည်သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုအတော်အတန်ဆိုးရွားစွာဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအင်္ဂါဂြိုဟ်သည် Venus နှင့် Saturn ကဲ့သို့သောပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုသည်သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။
ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့ synastry သို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်ကဘာလဲ?
ကျနော့်အမြင်မှာတော့ synastry ဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းစပ်ထက်ဆက်ဆံရေး၏ပိုကောင်းတဲ့ညွှန်ပြချက်။ ပေါင်းစပ် midpoints ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ synastry အမှန်တကယ်နေရာချထားဖြစ်ပါတယ်။ synastry ကိုဖွဲ့စည်းထားသည့်စုပေါင်းခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်နေရာချထားခြင်းများပါဝင်သောအလယ်တွင်အစည်းအဝေးအယူအဆအကြားအတော်အတန်ကွာခြားချက်ရှိသည်။
အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်အတွက်ကြယ်ငါးကြည့်ခြင်းကဘာလဲ။
Libra ဟူသောအမည်သည် Scales အတွက်လက်တင်အမည်ဖြစ်သည်။ ဂရိနိုင်ငံတွင် Zichos သည်အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပြီးစပိန်တွင် Libra နှင့်ပြင်သစ် Balance တို့တွင်ရှိသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်နိမိတ်လက္ခဏာ: Aries ။
ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်။ Zodiac သည်ကင်ဆာဖြစ်သည် - Horoscope Personality အပြည့်အဝဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားသောကင်ဆာတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်၌စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လွမ်းဆွတ်မှုသဘောသဘာဝရှိသော်လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာပင်အင်အားအလွန်များသော၊
Aprilပြီလ ၂၉ ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခြင်းဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
Aprilပြီလ ၂၉ ရက်အတွက် zodiac သင်္ကေတ Taurus ဖြစ်သည်။ နက္ခတ်ဗေဒင်သင်္ကေတ: Bull ။ ဤသင်္ကေတသည်ခေါင်းမာခြင်း၊ ၎င်းသည်Aprilပြီလ ၂၀ ရက်အကြားမွေးဖွားသူများအတွက်ထူးခြားသည်။
အနောက်နက္ခတ်ဗေဒင်နှင့်ဆင်တူသည့်တရုတ်နက္ခတ်ဗေဒင်တွင်တိရိစ္ဆာန်များကိုကိုယ်စားပြုသောကြယ်ပေါင်း ၁၂ ခုရှိသည်။ သို့သော်တရုတ်နက္ခတ်ဗေဒင်၌, ရာသီဥတုနိမိတ်လက္ခဏာရာသီတစ်နှစ်လုံးကြာရှည် - အဖြစ်အနောက်တိုင်းနက္ခတ်ဗေဒင်ရဲ့ဆန့်ကျင် ...
Aprilပြီ ၁၅ ရက်ရဲ့နိမိတ်လက္ခဏာကဘာလဲ။
15ပြီ ၁၅ ရက်Zပြီ ၁၅ ရက် - Zodiac သင်္ကေတ - Aries သင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုlovingပြီ ၁၅ ရက်မှာမွေးဖွားတဲ့ Aries တစ်ယောက်အနေနဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့သဘောထား၊ အကောင်းမြင်ခြင်းနှင့်ရက်ရောမှုတို့ဖြင့်သတ်မှတ်သည်။ ဆီသို့အပျက်သဘောဆောင်သောလူများစွာရှိပါတယ်နေစဉ် ...
နိုဝင်ဘာလ 17 ရက် Birthday Horoscope
နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်အတွက်ကြယ်ငါးပွင့်သည်အဘယ်နည်း။
Sagittarius လစဉ် Horoscope နှင့်စက်တင်ဘာလ
စက်တင်ဘာလ Sagittarius များအတွက်ကောင်းသောလလား?
မတ်လ4မွေးနေ့ Horoscope
မတ်လ ၄ ရက်နေ့မှာမွေးဖွားတဲ့အခါဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
အောက်တိုဘာလ 24 မွေးနေ့ Horoscope
အောက်တိုဘာ ၂၄ သည်မွေးနေ့ကောင်းလား?
စက်တင်ဘာ 1 မွေးနေ့ Horoscope
စက်တင်ဘာ ၁ ရက်ရဲ့ရာသီခွင်အမှတ်အသားကဘာလဲ။
ကင်ဆာလစဉ် Horoscope နှင့်ဇွန်လ
မတ်လဟာ Sagittarius အတွက်လကောင်းလား။
အောက်တိုဘာ 26 မွေးနေ့ Horoscope
အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်အတွက် horoscope ဆိုတာဘာလဲ။
© 2021 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး | edu-helper.org